nmn ntụ ntụ ， nr ntụ ntụ, tadalafil uzuzu-emeputa RFQ
Daalụ maka ịkpọtụrụ anyị! Anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya, laghachi na home peeji nke ma ọ bụ hụ ihe ọzọ ngwaahịa.
Ị bụ onye emeputa ma ọ bụ ụlọ ahịa ahịa?
Biko zipu ndokwa ịzụta ihe site na ozi email ([email protected]) a ga-enyekwa nkọwa, tinyere oge ịkwụ ụgwọ.
Ikwụ ụgwọ mere na ngwugwu ihe nnata & adreesị nyere.
A ga-ewepụta ngwongwo na nọmba nsuso, eserese ngwugwu, nọmba nyocha na ụbọchị mbata echere.
A na-enweta ihe ndị e nyere ma kwuo ihe.
Kedu otu esi amalite iwu ma mee ịkwụ ụgwọ?
Ị nwere ike iziga anyị ịzụta ịzụta ma ọ bụrụ na ị nwere, ma ọ bụ zipụ nkwenye dị mfe site na email ma ọ bụ site na Njikwa ahịa, mgbe ahụ, anyị ga-ezitere gị Akaụntụ Mgbapụta na nkọwa ụlọ akụ anyị maka nkwenye gị iji kwụọ ụgwọ dị ka arịrịọ gị.
Ihe Nlereanya Dị?
Ee, ụfọdụ ngwaahịa nwere ike izipu dị ka ihe ntanye n'efu, ma na ị kwụọ ụgwọ maka ụgwọ mbupu.
Kedu otu esi ejide ihu ngwaahịa tupu i tinye iwu?
COA, HPLC, HNMR dị.
A ga-enye akwụkwọ nyocha site na ụlọ ọrụ nke atọ site n'oge ruo n'oge.
Kedu ka m ga-esi jide n'aka ego m?
Ihe ọ bụla maka anyị raw ntụ ntụ enwere ike iweghachite tupu a na-ezigara ihe.
Maka ịkwụ ụgwọ niile a na-akwụ na AASraw, a ga-akwụ ha ụgwọ maka ịkwụsị, ịkwụ ụgwọ, nyefee, ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị nwere ike n'ime afọ 5.
Kedu maka oge nnyefe?
N'ime 1 ~ 3 ụbọchị mgbe ịkwụ ụgwọ kwadoro. (Ezumike china adịghị etinye).
Ee, maka ibu buru ibu, anyị na akwado mgbe niile na ọnụahịa ka mma.
Ị nwere ike ikwusi ike inweta nnweta?
Anyị na-ahazi ihe ndị anyị na-eji ere ihe na ụlọ ọrụ na-achịkwa ụlọ, nke ga-eme ka anyị nweta oge.
Don't maghị ozi ngwaahịa ahụ?
Maka nkọwa nke ngwaahịa a, ị nwere ike ịhụ anyị ngwaahịa nkọwa na isiokwu blog A ga-enwe ezi azịza